Wadatashi ku saabsan Arrimaha Webiyada Jubba iyo Shabeelle oo lagu qabtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Wadatashi ku saabsan Arrimaha Webiyada Jubba iyo Shabeelle oo lagu qabtay Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wadatashi ku saabsan Arrimaha Webiyada Jubba iyo Shabeelle oo lagu qabtay Muqdisho
By A warsame on 9th September 2019
Muqdisho, Sebtembar 08, 2019; Agaasimaha Madaxtooyada Qaranka Dr.Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade) oo ka qeyb galay Kulanka Wadatashiga Arrimaha Webiyada dalka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Guddiga Dowladda ee arrinkan u xilsaaran in lagu sugayo sahan dhammeystiran iyo siyaasadda ku aaddan ka faaiideysiga wabiyada Jubba iyo Shabeelle.
Kulanka oo ay ka soo qeyb galeen Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Mudane Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi, Khuburo ka tirsan Jaamacadaha dalka, Guddiga Diblumaasiyadda Biyaha Xuduudaha ka Gudba iyo Wasaaradaha la shaqeeya, Xubno ka tirsan Bulshada Rayidka ah iyo Xeeldheerayaal Soomaaliyeed oo ku takhasusay khayraadka biyaha ayaa lagu soo bandhigay talooyin wax-ku-ool ah oo ku wajahan diyaarinta siyaasadda biyaha, hannaanka wadaagga biyaha xuduudaha ka gudba ee dalalka dariska ah iyo tayeynta Guddiga heer Qaran ee arrinkas u xilsaaran.
“Shirkani diirada ma saarayo biyaha webiyada oo kelliya ee waxa uu ku saabsan yahay in aan yeelanno siyaasadda ka faaiideysiga biyaha. Waxaa muhiim ah in aan kala hadalno dalalka aan deriska nahay sidii aynu u wadaagi lahayn biyaha wabiyada ee naga dhexeeya, taasna waxaa aasaas u ah in aan marka hore wadatashi iyo xog-isweydaarsi dhexdeenna ah ka yeelanno” Ayuu yiri Dr.Fuursade
Agaasimaha ayaa tilmaamay in ay nasiib darro tahay in dadka Soomaaliyeed ay la noolaadaan abaaro iyo caqabado biyo yaraan ah, iyadoo dalkeennu uu kulaalo xeebta ugu dheer Qaaradda Afrika, sidoo kalena ay ku burqamaan wabiyada Shabeelle iyo Jubba.
webiyada juba shabelle